ProForm Tababaraha Hybrid Kaliya $ 399 leh Boostada BILAASHA - Dib-u-Celinta Fudud
Home » Amazon » ProForm Tababaraha Hybrid Kaliya $ 399 leh Boostada BILAASHKA ah
Dib-u-bixinta fayodhawrka waxay soo bandhigtaa Kafaariiq Tababaraha Khibrad La'aan ah Amazon
ProForm Tababaraha Hybrid Kaliya $ 399 leh Boostada BILAASHKA - Qiimaha Rukunka Asalka ah $ 799. Save $ 400 Off Retail !!
Ka hel Mashiinka 2 ee 1, oo ah Elliptical and Recumbent Bike
Bixinta faaiidooyinka baaskiil jimicsiga iyo elliptical, tababarahan wuxuu bixiyaa raaxo, noocyo kala duwan iyo diyaargaroowga wadnaha oo hooseeya. Qalabka tababarka sare ee jirka iyo kuwa kor loo qaaday, kuwa kor loo qaadi karo, tababaraha qalabka ayaa bixiya tababar guud oo jirka ah. Iyo, oo leh kursi raaxo leh oo kursi leh, waxaad ka heli kartaa tababarka wadnaha oo ku habboon baaskiil jimicsi. U hagaaji pedala si uu uqalmo booska elliptical ama baaskiilka. Waxaa intaa dheer, qunsulku wuxuu sidaa u dhigayaa, haddii aad fadhidid ama taagan tahay, waxaad si fudud u kormeeri kartaa jimicsigaaga daaqada ballaaran, LCD.
14 Workout-In Workout Apps
14 Heerarka Resistance Digital
Kormeerka Heerka Wadarta Wadnaha EKG
Kaydka Suuban Biyaha
350 Pound Capacity Capacity
5-Year Warranty Frame, iyo Qeybta 90-Day iyo Gargaarka Shaqada
Riix Halkan si aad u iibsato Professor Hybrid Prof. laga bilaabo Amazon
* Qiimaha $ 399 ee Professor Hybrid Tababaraha waa mid sharci ah oo ka mid ah 9 / 14 / 13 1: 21 PM PM. Sicirka qiimaha iyo helitaanka waa sax marka loo eego taariikhda / wakhtiga la tilmaamay iyo in la bedelo. Qiimaha iyo helitaanka macluumaad kasta oo lagu soo bandhigay Amazon.com xilliga iibsigu waxay khuseysaa iibsashada alaabtan
September 14, 2013 Jimicsiga Amazon, Ellipticals, Proform No Comment	qalab qiimo jaban, tababaraha qalinka $ 399, Baaskiilada jimicsiga bareega, iibinta Tababaraha Jinka
XARUMAHA EE BILAASH AH: 100 Khudaarta Diabeteska